/Blog/Ithala/Yonke into malunga ne-Oxandrolone (Anavar), kuya kufuneka uyazi
ezaposwa ngomhla 10 / 26 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Yintoni iOxandrolone (Anavar)?
Oxandrolone (I-53-39-4), ene-Anavar powder njengegama lophawu lwayo, sisiyobisi esenziwe nge-androgen kunye ne-anabolic steroid (AAS) esidume ngokuqina namandla okunyusa amandla. Iphakathi kweyona nto aziwa kakhulu kwaye isetyenziswe ngomlomo i-anabolic steroids. I-Anabolic kuthetha ukuba iyanyusa iiproteni zeseli, oko ke kukhokelela ekunyuseni ngokukhawuleza kwemisipha kunye namathambo omeleleyo.
Ukuba yi-analogue ye-testosterone (ukwakheka kwayo kuyafana ne-testosterone), uAnavar usebenze ngokukhethekileyo ii-receptors zenyukliya kwaye ubophelela kuzo ngendlela testosterone eyenzayo. Ngenxa yoko, kunokuba luncedo kunyango lwe testosterone.
IOxandrolone (Anavar) umgubo (53-39-4) ukhuselekile ukusetyenziswa ngamadoda nabasetyhini xa kulandelwa idosi echanekileyo. Ngcono nangoku, iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho zihlala zithambile. Kananjalo, sesinye sezisombululo zokuya kubantu abanengxaki yokuphulukana ne-HIV okanye i-hypogonadism yamadoda njengoko kuphucula ukugcinwa kwe-nitrogen kunye nobunzima bemisipha engenamafutha.
Ukuba ujonge i-anabolic steroid elulamileyo kodwa ekhawulezayo endodeni okanye emfazini, akunakulindeleka ukuba uhambe kakubi ngeOxandrolone powder (53-39-4). Abanye abantu, nkqu nokuhlolwa kwe-Anavar reddit, bayibiza ngokuba yi "The Girl Steroid" kuba iphakathi kweesoftware ezimbalwa ezihamba kakuhle kuninzi lwabasetyhini.
I-AASraw ngumenzi oyingcali we-anavar powder (oxandrolone).
Oxandrolone (Anavar) yachazwa okokuqala ngonyaka we-1964 eSearle Laboratories (okwangoku yinkxaso yePfizer). Inkampani ikwangumenzi wezinye iziyobisi ezibalaseleyo ezinje ngeCelebrex, iNutraSweet kunye neAmbien. Kukuyilwa kweenzame zokusebenzisana zikaRafael Pappo noChristopher J. Jung.
Iingcali zophando zazinomdla kwiziphumo ezibuthathaka kakhulu ze-androgenand ye-Oxandrolone ngokunxulumene nefuthe leziyobisi ze-anabolic. Kamva, ngo-1964, bazisa ichiza njenge amayeza amayeza okunyusa amandla e-misuli kwakhona kubantu abanciphise ubunzima emzimbeni kunye nonyango lwe-HIV / AIDS.
Ngelishwa, eli chiza lahlukumezeka ngokomgangatho omkhulu ngabakhi bomzimba, kwaye oku kwazisa uluntu olubi. Ngenxa yoko, iSearle Laboratories yayilahla kwi1989.
Emva kweminyaka eliqela, iBio-Technology General Corporation (i-Bio-Technology General Corporation) yathatha uphando kunye nokuphuhliswa kwesiyobisi. Izilingo zeklinikhi ezenziwa yinkampani kwichiza kwi-1995 zikhokelela ekukhutshweni kwesibini, kodwa emva koko phantsi kwe-Oxandrin (igama lophawu).
Ngeli xesha, amayeza e-anabolic steroid athengiswa phantsi kwamagama ohlobo oluthile, kubandakanya iGenesis Oxandrolone kunye ne-Oxandrin, kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, kamva yadityaniswa kwigama langoku laseMelika, Anavar.
Ngexesha, uLawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweziyobisi (i-FDA) livume iOxandrolone yokuba ichiza lobunkedama njengonyango lweTurner Syndrome, ukwehla kobunzima obubangelwa yi-HIV kunye nokwehla kobunzima ngenxa ye-HIV.
Ukusetyenziswa kweOxandrolone zombini kwintengiso kunye nangaphantsi komhlaba
IOxandrolone iyabiza kakhulu ukuvelisa kwaye kukho imigaqo engqongqo malunga nemveliso yayo, intengiso kunye nokusetyenziswa. Ukuthintela le ngxaki kwaye ugcine ngeendleko, bekukho abathengisi abaninzi abathathe ishishini lokwenziwa nokuthengisa eli chiza ngokufihlakeleyo.
Ngelishwa, imarike emnyama 'Oxandrolone' yenziwa kwiilebhu ezingacocekanga apho imigangatho ifunekayo ingalandelwa. Ngenxa yoko, kunzima kakhulu kubasebenzisi ukuba bafumane i-esemthethweni ye-Anavar kwintengiso emnyama okanye ilabhoratri ephantsi komhlaba. Ngaphandle kokunganiki iziphumo ezifunwayo, ichiza elinokukhokelela kwiziphumo ezichaseneyo.
Enye ingxaki ngeAnavar yentengiso ephantsi kwemarike kukuba inokuxhatshazwa nkqu nangabantwana kuba akukho mithetho ithintelayo ekufumaneni nasekusetyenzisweni kwayo.
Ukuba ufuna ukufumana i-Anavar yangempela kwaye ikhuselekile, qinisekisa ukuba uyayenza I-Oxandrolone powder ithenge kumthengisi onamaphepha-mvume kunye nasemthethweni. Nangona i-Oxandrolone ithenge kubathengisi abanjalo kungenzeka ukuba icekeceke xa kuthelekiswa nezo zeemarike ezimnyama, zibalulekile.
Uqinisekisiwe ukuba ufumana i-powder eluhlaza okanye imveliso yokugqibela ngenxa yokuba uninzi lwabathengisi abanakubeka esichengeni sokuphulukana nelayisensi yabo ngenxa yokuthengisa imveliso engekho mthethweni. AASraw uphakathi kwabathengisi ababalaseleyo be-Oxandrolone yangempela.
Ixabiso le-oxandrolone iphakame ngokwesiqhelo. Ke, ukuba udibana nomthengisi ethengisa iyeza ngexabiso 'lesaphulelo esinzulu', khangela ukuba umthengisi unelayisensi kwaye usebenza ngokusemthethweni ukuqinisekisa ukuba awupheli ngemveliso engekho mthethweni.
I-Anavar / i-Oxandrolone yinto ebiza kakhulu ukuyenza, kwaye ngokubanzi ayicetyiswa ukuba iyithenge nakowuphi na umrhwebi oyinikayo ngamaxabiso 'ezaphulelo ezinzulu'. Ungajonga Uhlaziyo lwe-Anavar Ukufumanisa ukuba umthengisi uyasebenza ngaphakathi kwesakhelo somthetho nokuba iimveliso zabo ziyinyani. Uhlaziyo lwe-Anavar lunokunika nezimvo ngokubhekisele kweyona ndawo elungileyo yokuthenga amayeza.
Umbandela womthetho we-Oxandrolone e-US nakwamanye amazwe
E-US, i-Controlled Substance Act ichaza i-Oxandrolone / Anavar, phakathi kwezinye ezininzi i-androgen kunye ne-anabolic steroid njengeShedyuli III elawulwa yinto. Oko kuthetha ukuba umntu kufuneka ayifumane kugqirha onelayisensi nakwikhemesti.
Isohlwayo esingokwasemthethweni esitshutshiswa kumntu onelungelo lokufumana ichiza ngokungekho mthethweni kwishedyuli III, kubandakanya Anabolic steroids powder yeOxandrolone okanye iAnavar yokugqibela, ixhomekeke kwimithetho efanelekileyo elawula ilizwe.
Kwiimeko ezininzi, aboni babekwa emva kwebhadi kwaye bahlawuliswe. NgokomThetho oLawulwayo weZinto eziThintelweyo, ezinye zolwaphulo-mthetho ezinxulumene ne-Oxandrolone zibandakanya ubuqhophololo ekufumaneni uncwadi kunye nokufumana ichiza ngaphandle kommiselo osemthethweni.
E-UK, i-Oxandrolone yenye yezinto ezilawulwayo ezihlelwe kuLuhlu IV; zonke ii-anabolic steroids zezeli candelo.
ECanada, imithetho yelizwe ngokubhekisele kwi-Oxandrolone yayifana naleyo yase-UK kude kube yi-1996 xa kwakuhlaziywa umthetho, ngaphandle kweshedyuli IV. Ngenxa yoko, akukho sikhokelo sicacileyo malunga nokuqinisekiswa okusemthethweni kwabantu abebephethe ichiza, abo banalo ngoku kunye nabo banomdla wokubanalo.
Nangona kunjalo, umthetho wase-Canada we-steroid unomqolomba ocacisa ukuba umntu okweli lizwe akanako ukuthenga iyeza ngaphandle kokuba bayacacisa ukuba kutheni befuna ukuyithenga. Kuxhomekeka kwisizathu esinikiweyo, umthengisi angasamkela okanye asikhabe isicelo sokuthenga. Inzame yokuthenga i-steroid kufuneka ilandelwe ubuncinci kwiintsuku ezingama-30 ngaphambi kokuba kwenziwe enye.
Ubufazi kwi Imithetho yeziyobisi yaseCanada, ngakumbi ukuya kuthi ga e-Oxandrolone, ibonakala ibhetyebhetye ngenjongo yokwenza ukuba amagosa akhe enze isigwebo sasimahla kwiimeko apho abakhi bomzimba bafunyanwa besebenzisa i-steroid ngeenjongo zokuzonwabisa. Nangona kunjalo, kwiimeko ezininzi, ityala lokuqala elinxulumene no-Anavar libonisa isohlwayo esingadluli kwi $ 2000 kunye nexesha lokuvalelwa ukuya kwiinyanga ze-18.
Isimo sezinto ezi-Oxandrolone raw raw China
Ukuveliswa kwee-steroid ezifana ne-Oxandrolone kulawulwa kakhulu kumazwe amaninzi kwaye oku kunciphisa inani labenzi bayo.
Nangona kunjalo, abarhwebi abamnyama abathengisa kumazwe ahlukeneyo, kubandakanya ne-US bathatha amathuba okufumana izithembiso ezisemthethweni zokungenisa izixhobo zeOxandrolone kunye nokwenza kunye nokuthengisa iziyobisi ngaphandle kolwazi lwamaqumrhu afanelekileyo olawulo lukaRhulumente.
I-China inamashumi abathengisi abagunyazisiweyo be-powder eluhlaza yeOxandrolone. Oku kwenza ukuba imveliso ibekhona ngakumbi elizweni kunabathengi abanqwenela ukuyithenga ukuze kuqhubekiswe phambili. Ngelishwa, ezinye zezinto ezingafunekiyo zomgubo ovela eOxandrolone powder zivela eChina zenziwa buthathaka, zikhokelela kwimveliso kunye nentengiso ye-Oxandrolone ye-contraband kwihlabathi liphela.
Yintoni onokuyilindela ngeOxandrolone?
Uninzi lwabasebenzisi be-Oxandrolone bathatha i-steroid yokufumana ubunzima ngokukhula kwezihlunu. Oku ikakhulu kukuphucula impilo yabantu abahlwempuzeka kakhulu ngenxa yosulelo okanye utyando.
Okumangalisayo kukuba, ubunzima obuvela ngenxa yokusetyenziswa kweAnavar bubunzima bemisipha ngenxa yokuba iihomoni ezibonelelwa liyeza alichaphazeli. Kananjalo, umzimba wakho awuyi kuva nokugcinwa kwamanzi okugqithisileyo njengesiphumo sokusebenzisa le steroid. Okunye okumangalisayo ngeziphumo zeli chiza kukuba kulula ukuba umsebenzisi abambelele kwisiphumo sokufumana ubunzima.
Nangona ichiza linganikezeli ukuzuza okulingana noko kunokubangelwa kukusetyenziswa kwezinye iiarhente ezithandwayo ezinje ngeTestosterone kunye neAnadrol, kuya kulunga kubantu abafuna imbuyekezo elungileyo. Yiyo loo nto ethandwa kakhulu ngabasetyhini kuba uninzi lwabo banomdla nje ekunyukeni kwemisipha encinci.
Nokuba ufuna iAnavar yamadoda okanye I-Anavar yabasetyhini zokufumana ubunzima ngexesha elininzi ngexesha lasemva kwexesha elingaphandle, ngokuqinisekileyo uya kuzithanda iimpawu zokunyusa umzimba ze-Oxandrolone. Uya kuthi uqaphele ukuba kukwenza ukuba uzuze inani elincinci lamafutha omzimba angekhoyo ngexesha lokuthelekisa xa usebenzisa ezinye ii-steroid ezinamandla.
I-Anavar yamadoda okanye i-Anavar yabasetyhini inokuba sisongezo esiluncedo kakhulu kuwe ngexesha lesigaba sokusika. Isiyobisi ngokwemvelo sinamandla i-anabolic. Kananjalo, kusebenza kakhulu ekugcinweni kwezicubu ezincinci xa umntu esitya.
Xa ufuna ukuphalaza amanqatha omzimba, umthamo wakho wekhalori kufuneka ube ngaphantsi kunexabiso lekhalori oyitshisayo kulondolozo lwezicubu ezomeleleyo. Nangona kunjalo, ngaphandle kokungafani kokutya okutyayo, uya kuphulukana nemisipha ukuba umzimba wakho awunayo iarhente ye-anabolic enamandla. Ukujonga iipropathi zayo ze-anabolic ezomeleleyo, kulapho u-Anavar esiza khona.
Xa usebenzisa i-Anavar ngexesha lesigaba sokusika, umzimba wakho uya kuba nako ukutshisa amanqatha ngokufanelekileyo. Ekugqibeleni, uya kubona ukuphuculwa kwamathambo kwaye uya kujongeka womelele kwaye ucacisiwe ngakumbi. Yiloo nto amadoda amaninzi ekhetha I-Anavar yokunciphisa umzimba.
I-Anavar lukhetho olukhethiweyo lwe-steroid kwiimbaleki ngenxa yokuphawuleka kokukhulisa amandla. Nangona kunjalo, isiphumo sayo koku asichazwanga njengezinye i-steroids ezinjengeHalotestin okanye i-Dianabol.
Ukomelela kwimbaleki kunefuthe kwisantya namandla alo, omabini anempembelelo ethe ngqo kwintsebenzo yakhe epheleleyo yeembaleki. Okukhona iimbaleki iba namandla, kokukhona isebenza kakuhle.
Ngaphandle kwamandla, iimbaleki kufanele ukuba zilula kwaye kunjalo, azifuni kwakhiwa izihlunu ezomeleleyo. Ngenxa yokuba ukomeleza kwakhe umntu ngaphandle kokonyuka ngokwakha izihlunu zabo, u-Anavar uba ngumlungisi ofanelekileyo weembaleki. Ngcono, ayikhokeleli ekugcinweni kwamanzi, enokuthi ibe yinto ethintela iimbaleki.
Nokuba usebenzisa i-Anavar ukuphalaza amanye amanqatha okanye ukuphucula intsebenzo yakho, uya kuqaphela ukuba nje ukuba uthathe ichiza njengoko kumiselwe, izinga lakho lokubuyisela liphucuka kakhulu. Ngaphandle koko, kuphucula unyamezelo lwakho lwemisipha.
Ngenxa yoko, uya kuthatha ixesha elide ngaphambi kokuba udinwe xa usenza imisebenzi yomzimba, ke amandla okunyanzela ubunzima kunye nokwandiswa okude. Oku kukunceda ukuba uxhamle ngakumbi kwiiseshoni zoqeqesho lomzimba.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeOxandrolone
Nazi iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo kuninzi lwee-steroids ezaziwayo. Makhe sijonge ukuba iziphumo ze-oxandrolone zinento yokwenza nazo.
Ngokungafaniyo nezinye i-steroids ezifana Trenbolone i-aromatize, yiyo loo nto ibangela i-gynecomastia, ihormoni ebonelelwa yi-Oxandrolone ayibangeli naluphi na uhlobo lweziphumo ze-estrogenic. Kungenxa yokuba ayibangeli kugcinwa kwamanzi nto leyo eya kwenza ukuba amanqanaba e-estrogeni anyuke. Ipropathi engagcinwa amanzi isenza ukuba umsebenzisi angabi sengozini yoxinzelelo lwegazi oluphezulu.
Ukungalindeleki kwe-Oxandrolone ukubangela iziphumo ebezingalindelekanga ze-estrojeniki kukwabangelwa kukuba ayithwali nawuphi na umsebenzi onxulumene neprogestin.
Nangona i-Oxandrolone ingeyi-androgenic kakhulu, izisa umsebenzi omncinci we-androgenic. Ngenxa yalonto, abantu abayisebenzisayo banokwenzeka ukuba bakhule amabala kunye nabo banokuchaphazeleka kakhulu kumandla webala lempundu kusenokwenzeka ukuba babe nokufumana ukulahleka kweenwele ngakumbi emva kokusebenzisa i-steroid.
I-Anavar yabasetyhini inokuvelisa iimpembelelo ze-androgenic ezinokuthi zikhuthaze iimpawu zentsholongwane ezinjengokukhula kweenwele zomzimba, ukuqiniswa kwamazwi kunye nokuqina okwandisiweyo kwabasetyhini. Nangona kunjalo, iimpawu zinokuthi zithintelwe ngokuthatha ngokufanelekileyo NeAnavar.
Ukuba ungumfazi kwaye uneempawu zentsholongwane, kucetyiswa ukuba uyeke ukusebenzisa iyeza ngokukhawuleza. Emva kokuba wenze oko, iimpawu kufuneka zinyamalale. Ngaphandle koko, iimpawu zinokuba yinxalenye yakho ukuba uyazityeshela kwaye uqhubeke ne-steroid.
Nangona kunjalo, uninzi lwabasebenzisi be-steroid abayiva imiphumo emibi ye-androgenic ngenxa yokuba imeko ye-androgenic iphantsi ngokupheleleyo.
Ngokungafaniyo nezinye i-anabolic steroid ezifuna ukusetyenziswa ecaleni kwe-5-alpha reductase inhibitors zokugqibela ukuthintela iziphumo ebezingalindelekanga ze-androgenic, u-Anavar ukhuselekile kwaye unobumnene nangaphandle kwezithintelo. Kungenxa yokuba i-enzyme ye-5-alpha reductase yenzelwe ukunciphisa i-testosterone kwi-dihydrotestosterone, kodwa ekubeni i-Oxandrolone sele sele iyinto ye-dihydrotestosterone, ayiyidingi i-enzyme.
Enye yeziphumo ezibi kakhulu ze-oxandrolone yinto enokuyenza nge-cholesterol. Ihomoni yeOxandrolone inyanzela i-cholesterol ye-HDL ukuya kuthi ga kwi-50% ngelixa inyusa amanqanaba e-cholesterol ye-LDL ukuya kuthi ga kwi-30%.
Ngenxa yolu tshintsho lwe cholesterol, abantu abanemicimbi ye cholesterol bacetyiswa ukuba baphephe ukongeza usebenzisa i-oxandrolone. Ngaphandle koko, ezo zisempilweni ngokwaneleyo ekusebenziseni kwayo ziyakhuthazwa ukuba zigcine impilo esempilweni ngokutya ukutya okune-cholesterol enamaqondo aphezulu ama-acid kunye nokwenza imisebenzi emininzi yentliziyo.
Xa usebenzisa eli chiza, kuyacetyiswa ukuba unqumle kwiifatata ezigcwele ukutya kunye neswekile elula. Ungasifaka isongezelelo se-cholesterol antioxidant ukugcina amanqanaba abo ekujongeni.
Nasiphi na i-steroid oyithathayo, kubandakanya Anavar, inyanzela imveliso yendalo ye testosterone emzimbeni wakho. Nangona kunjalo, izinga lokucinezela lahlukile kwi-steroid ukuya kwenye. Xa kuthelekiswa nezinye i-steroids ezithengiswayo ngoku, u-Anavar unesinye sezona ziphumo zicothayo. Icinezela onke amanqanaba e-serum phantse ngesiqingatha.
Nangona kunjalo, nangona i-Anvar yendalo ye-testosterone yemveliso yokunyanzela isiphumo incinci, amadoda acetyiswa ukuba enze i-testosterone yangaphandle yinxalenye yezinto zabo zokuxhasa. Ngaphandle koko, i-hormone ye-oxandrolone inokubangela imeko ehambelana ne-testosterone, phakathi kwezinye iimpawu ezinokubakho.
Nangona kunjalo, amanye amadoda awanawo nawuphi na umba ohambelana ne-testosterone njengesiphumo sokusebenzisa u-Anavar nokuba amanqanaba emveliso yabo ye-testosterone ancitshiswa yi-50% yi-steroid. Oku kuxhomekeke kwindalo ye-testosterone yendalo nangona. Nangona kunjalo, uninzi lwamadoda luya kufuna unyango lwe-testosterone yangaphandle ukunciphisa iimpawu ezinokwenzeka ngenxa yokusetyenziswa kwe-steroid.
Ngethamsanqa, njengayo nayiphi na enye i-anabolic steroid, imiphumo emibi ye-testosterone ye-Anavar iya kuqala ukuphela xa umntu eyekile ukuyithatha. Kodwa ukubuyisela kwakhona ngokupheleleyo kuya kuthatha ixesha lokuba kwenzeke kwaye eso sisicwangciso somjikelo weposi (PCT) siyacetyiswa kwikhosi ye-steroid yonyango igqityiwe. I-PCT ikhawulezisa inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
I-Anavar yi-C17-aa Anabolic steroid kwaye ke, kungakhokelela ekonakaleni kwesibindi, nangona kungenjalo ngokuthe ngqo. Ukuqhubeka kokusetyenziswa kwe-steroid kunokubangela ukwanda okukhulu kwamaxabiso e-enzyme yesibindi. I-enzyme yesibindi eyandayo icinezela isibindi, yandisela umngcipheko wayo wokonakala.
Ke, ngenxa yempilo yesibindi sakho, kubalulekile ukukuphepha ukusebenzisa nayiphi na i-C17-aa anabolic steroid, kubandakanya u-Anavar kwimeko yokuba unayo nayiphi na ingxaki yesibindi. Kwakhona, ungabuseli kakhulu utywala xa usongeza kunye ne-C17-aa anabolic steroid efana ne-Anavar ukunqanda ukugqithisa isibindi sakho.
Isifo sokudumba kwesibindi kwisicwangciso sakho sokuxhasa ngelixa usebenzisa i-Oxandrolone iya kuhamba indlela ende ukugcina impilo yakho yesibindi. Kwaye kuba ukusetyenziswa okwandisiweyo kwe-steroid kunokubangela ukonakala kwesibindi, kubalulekile ukuba unqumle ixesha lokuongezwa kwe-Anavar ukuya kwiiveki eziphezulu ze-8.
Nangona i-Oxandrolone ilungele amadoda, umjikelo we-Anavar uthambe kakhulu emadodeni kangangokuba uninzi lwabasebenzisi bamadoda bayifumana ingasebenzi kakuhle kwiimfuno zabo zokukhula, ngakumbi ngexesha lokuphuma okanye ixesha lokukhula. Nangona kunjalo, basabambelela kuyo ngokulondolozwa kwemisipha ebambekayo, eyenye yezona njongo ziphambili kubasebenzisi abaninzi. Ngcono nangoku, ichiza liphucula umsebenzi we-metabolic yomntu.
Umjikelezo we-Anavar kubafazi
Ngelixa i-hormone ye-Oxandrolone ingeyoyokwandisa isininzi, akuqhelekanga ukuba umntu obhinqileyo abe namava e-100% yokufumana isisipha somzimba xa uyisebenzisa. Ngenxa yoko, kwaye iyinyani yokuba iyinyamezelo enyamezeleka kakhulu kwaye iyahamba-ukukhetha iimbaleki ezinabafazi ezinomsebenzi ofanelekileyo.
Abasebenzisi be-Oxandrolone yabasetyhini abakwindlela yokutya kunye nezigaba zokukhula baxhamla kakhulu kumachiza kuba ixhasa uluhlu olubanzi lwezinto zomzimba kubandakanya ukwakha umzimba, umzobo kunye nomzimba onamafutha.
Umjikelo oqhelekileyo we-Anavar kwabasetyhini uhlala kwi -10mg ukuya kwi-20mg yeyeza ngosuku kwaye uqhele ukuqhuma kwiiveki ezintandathu. Nangona eminye imijikelezo idlula kwi-20mg, ukugqithisa akuyimfuneko kwaye kunokubangela iziphumo ezibi ze-oxandrolone.
Kwimeko ukuba ungumfazi kwaye ufuna ukusebenzisa i-steroid ngaphezulu kweeveki ezintandathu, kuyacetyiswa ukuba uqale kwaye wenze kwenziwe nge-3 ukuya kwixesha leveki ye-4 ngaphambi kokuqalisa ikhosi yeveki ye-6.
Umjikelezo we-Anavar wamadoda
Uninzi lwabasebenzisi abesilisa bayazisebenzisa I-Anavar yokunciphisa umzimba ngakumbi xa bephantsi kwenkqubo yokusika / isigaba sokutya. Bafumana i-50mg yeyeza ngosuku njengeyona ndlela efanelekileyo yokuqalisa ye-Anavar. Nangona kunjalo, njengendoda, ungasebenzisa ukuya kuthi ga kwi-80mg ngosuku ngaphakathi komda, ichiza likhuselekile emzimbeni wakho.
Ukuqwalasela Ixabiso leOxandrolone ubuncinci yi- $ 2 nganye kwithebhu ye-10mg, umjikelo we-Anavar wamadoda unokubiza kakhulu.
Umthamo wase-Anavar wasekunene wahluka wabumba umntu ukuya komnye; kuxhomekeka kwisini somntu kunye nakwiinjongo zakhe ezizimeleyo.
Ngokubanzi, umfazi uya kufuna umthamo osezantsi we-Oxandrolone kunendoda ukufezekisa iziphumo / izibonelelo ezifanayo. Ngokwesiqhelo, umjikelo wokusika iAnavar kowasetyhini ukwisilinganiselo se-10mg yonke imihla. Nangona kunjalo, idosi yansuku zonke inokuhamba njenge-20mg kwaye nangona inokubangela iziphumo ezinqwenelekayo, idosi ephezulu kakhulu ye-steroid inokwenza umfazi ukuba akhulise iimpawu zentsholongwane.
Iimbaleki zamadoda ezinomdla wokuxhoma i-Anavar dosage ye-80mg ngemini iya kuba yeyona ilungileyo. Nangona kunjalo, idosi encinci ingamkelwa kodwa ayifanelanga ukuba ngaphantsi kwe-30mg, ngapha koko ayiyi kusebenza ngokufanelekileyo.
Ngokophando kunye ezahlukeneyo UAnavar Reddit uphononongo, umthamo oqhelekileyo we I-Anavar yamadoda yi-50mg ngemini.
Ungamzala njani i-Oxandrolone
Amandla: nge-1 gram yeOxandrolone
Uxinzelelo oluphezulu oluvelisiweyo: 20 mg / ml
I-1 gram ye-Oxandrolone powder
I-1 beaker elungele indawo yokuhlala umthamo weotywala
I-8 ml ye-PEG 300
I-2 ml ye190 yoBungqina boButywala
Ungayithenga phi i-Oxandrolone
Indawo ekuphela kwayo onokuthenga kuyo esemthethweni kunye nomgangatho ophezulu u-Anavar uvela kumthengisi onelayisensi kwaye ulawulwa ngokusemthethweni. Kwelo nqaku, i-AASraw yeyona ndawo ifanelekileyo yokufumana imveliso.
I-AASraw ijongana nokudibanisa okukhulu kunye nokuveliswa kweOxandrolone kwaye ke sinako ukukunika nabuphi na ubungakanani UAnavar ukuthengiswa okanye ukuphela kokutya nje ukuba uzalisekisa iimfuno eziyimfuneko. Sisebenza phantsi kweCGMP kwaye inkqubo yethu yolawulo lomgangatho olusebenzayo iyasinceda ukuba sisebenze ngaphakathi kwemithetho efanelekileyo kunye nemimiselo yokuqinisekisa ukuba sinikezela ngeemveliso eziphambili.
Inkcazo yeMeta: I-Oxandrolone (i-Anavar) sisiyobisi se-androgen kunye ne-anabolic (i-AAS) edume ngokuqina nangamandla. Iphakathi kweyona nto aziwa kakhulu kwaye isetyenziswe ngomlomo i-anabolic steroids. I-Oxandrolone ikhuselekile ukuba isetyenziswe ngabesilisa nabasetyhini xa kuthathwa imilinganiselo efanelekileyo.
Ukuxilonga i-RH, i-DeSanti L: I-Oxandrolone yanyanzelisa inzuzo enkulu ngexesha lokufumana kwakhona ukutshiswa ngokuqatha kugcinwa emva kokuyekiswa kwe-anabolic steroid. Ukutshisa. I-2003 Dec; 29 (8): 793-7. [PMID: 14636753]
UJohn Cabaj, "Inkqubo yokuhlanganiswa kwe-oxandrolone." I-US Patent US20030032817, ekhutshwe ngoFebruwari 13, 2003
IKarim, A., Ranney, RE, Zagarella, J., kunye neMaibach, HI (1973). Isimo se-Oxandrolone kunye nemetabolism emntwini. I-Clinical Pharmacology kunye neTherapeutics, 14 (5), 862-869.
URaiti, S., Trias, E., Levitsky, L., kunye noGrossman, MS (1973). I-Oxandrolone kunye nehommone yokukhula komntu: uthelekiso lweziphumo ezikhuthazayo ekukhuleni kwabantwana abafutshane. Ijenali yaseMelika yeZifo zaBantwana, i-126 (5), 597-600.
IRosenbloom, AL, kunye noFrias, JL (1973). I-Oxandrolone yokunyusa ukukhula kwi-Turner syndrome. Ijenali yaseMelika yeZifo zaBantwana, 125 (3), 385-387.
IStrauss, RH, iLiggett, iMT, kunye neLanese, RR (1985). Ukusetyenziswa kwe-Anabolic steroid kunye neziphumo ezibonakalayo kubadlali beembaleki abalishumi abaqeqeshiweyo. UJama, 253 (19), 2871-2873.
Isikhokelo sokuthenga esigqibeleleyo se-SARM SR9009 sokwakha umzimba IFlibanserin ilinceda njani ibhinqa njengeHormone yesondo